काठमाडौँमा अपार्टमेन्ट किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यस्तो छ मुल्य - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
मेरो लाइफस्टाइल	|| 28 November, 2021
काठमाडौँमा एउटा घर बनाउने सपना धेरैको हुन्छ । तर, सिमित आयस्रोत भएकाहरुको लागि यो सपना पुरा गर्न निकै गाह्रो छ । घर जग्गाको मुल्य आकाशिदो छ । यसैले अपार्टमेन्टमा बस्न रुचाउनेहरुको संख्या बढ्दो छ ।
जग्गा किनेर घर बनाउनुभन्दा बनि बनाउ अपार्टमेन्टले धेरै सुविधा दिएपछि मानिसहरु अपार्टमेन्ट तिर आकर्षित भएका हुन् । घर बनाउने झन्झट् भएन । सस्तो र सहज पनि भयो । त्यसैले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका अपार्टमेन्टहरुको मुल्य कति छ र सेवा सुविधाहरु के के छन् ?
मेरो सिटी अपार्टमेन्ट
मेरो सिटी अपार्टमेन्ट हात्तिवनमा छ । १ बेडरुम, १ लिभिङ रुम, १ किचन र १ बाथरुमको सुविधा भएको मेरो सिटी अपार्टमेन्टको मुल्य ५६ लाख रुपैँया तोकिएको छ । सानो परिवारको लागि यो अपार्टमेन्ट एकदमै उपयुक्त हुन्छ । १ करोड ७६ लाख रुपैँयामा वटा बेडरुम, किचन, डाइनिङ, लिभिङ रुम र २ वटा बाथरुमको सुविधा छ । यस अपार्टमेन्टमा जिम, पार्किङ, गार्डेन तथा अन्य सुविधाहरु पनि उपलब्ध छन् ।
पेप्सिकोलामा अवस्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा ९० लाख रुपैँयामा ३ वटा बेडरुम, १ किचन , १ लिभिङ रुम र २ वटा बाथरुम भएको अपार्टमेन्ट पाउन सकिन्छ । यहाँ ९० लाखदेखि १ करोड ५० लाख रुपैँयासम्मको अपार्टमेन्टहरु उपलब्ध छ । यस अपार्टमेन्टको ५ वटा टावरमा ५०० वटा अपार्टमेन्टहरु छन् । धेरै क्षेत्रफलमा फैलिएको यस अपार्टमेन्टमा स्विमिङ पुल, पार्किङ, २४ घन्टा सेक्युरिटि लगायतका सुविधाहरु पनि उपलब्ध छन् ।
के एल रेसिडेन्सी लक्जरी अपार्टमेन्ट
ज्ञानेश्वरमा रहेको के एल रेसिडेन्सी लक्जरी अपार्टमेन्टमा ४ करोडदेखि ५ करोड रुपैँया मुल्य पर्ने अपार्टमेन्टहरु उपलब्ध छन् । ३/४ वटा बेडरुम, किचन, लिभिङ रुम र २ वटा बाथरुमको सुविधा भएको यस अपार्टमेन्टमा स्विमिङ पुल, जिम र पार्कीङको पनि व्यवस्था छ ।
ललितपुरस्थित मेडीसिटी अस्पतालबाट ५ मिनेटको दूरीमा रहेको सनराइज अपार्टमेन्टको मूल्य ८५ लाख रुपैयाँ तोकीएको छ । जसमा २ वटा बेडरुम, किचन, हल र एउटा बाथरुम छ । त्यस्तै यहाँ २ करोड रुपैँया पर्ने अपार्टमेन्ट पनि उपलब्ध छ जसमा ५ वटा बेडरुम, किचन, हल र ३ वटा बाथरुमको सुविधा छ भने पावर ब्याकअप जेनेरेटर, पार्कीङ र जिमखानाको समेत सुविधा छ ।
सोल्टि सिटी अपार्टमेन्ट
रविभवनमा अवस्थित सोल्टि सिटी अपार्टमेन्टमा ६२ लाख ७० हजार रुपैँया देखि ३ करोड १८ लाख ५० हजार रुपैँया सम्मका अपार्टमेन्टहरु उपलब्ध छन् । १ बेडरुम, हल, किचन, बाथरुम देखि ४ बेडरुम,हल, किचन, २ वटा बाथरुम भएका रुमहरुको सुविधा रहेको यस अपार्टमेन्टमा पनि स्विमिङ पुल, जिम, पार्कीङ लगाएतका सुविधाहरु उपलब्ध छन् ।
धापाखेलमा रहेको डाउनटाउन अपार्टमेन्टमा ८५ लाख रुपैँयादेखि ३ करोड ६५ लाख रुपैँयासम्मका अपार्टमेन्टहरु उपलब्ध छन् । ९५ प्रतिशत अपार्टमेन्टहरु बिक्रि भईसकेका छन् भने ५ प्रतिशत अपार्टमेन्टहरु बिक्रीमा छन् । यस अपार्टमेन्ट स्टुडियो अपार्टमेन्टहरु उपलब्ध छन् जसलाई ग्राहकले आफ्नो इच्छा अनुसार पार्टेसन गरेर रुमहरु निकाल्न सक्नेछन् ।
सनराईज सीटी होम्स
नयाँ बानेश्वरको बिजुली बजारमा अवस्थित सनराइज सिटी होम्समा ५ वटा अपार्टमेन्टहरु बिक्रिमा छन् । २ बेडरुम,किचन, लिभिङ र १ बाथरुम भएको अपार्टमेन्टको मुल्य २ करोड ४३ लाख रुपैँया तोकिएको छ भने ३ बेडरुम, किचन, लिभिङ रुम र २ वटा बाथरुम भएको अपार्टमेन्टको मुल्य २ करोड ९५ लाख रुपैँया तोकीएको छ । यहाँ जिमखाना, कम्युनिटी हल, २४ घन्टा सेक्युरिटी लगायतका सुविधाहरु पनि रहेको छ । २ वटा स्विमिङ पुल, जिमहल, कम्युनिटीहल, २४ घन्टा पानी र सेक्यिुरिटी लगाएतका सुविधाहरु छन् ।
एम्पेरियल कोर्ट अपार्टमेन्ट सानेपा
सानेपामा अवस्थित एम्पेरियल कोर्ट अपार्टमेन्टमा २ बेडरुम,हल, किचन भएको अपार्टमेन्टको मुल्य १ करोड २५ लाख रुपैँया तोकीएको छ । त्यस्तै ४ बेडरुम,हल किचन र ३ वटा बाथरुम भएको अपार्टमेन्टको मुल्य २ करोड ५० लाख रहेको छ । यस अपार्टमेन्टमा जिम, स्विमिङ पुल, कम्युनिटी हल, पार्कीङ र पावर ब्याकअप जेनेरेटर लगाएतका सुविधाहरु रहेका छन् ।
‘सवारी साधन हुने अस्पताल तिर कुद्छन्, नहुने घरमै रुँदै बस्छन्’
बगरबाट घर खोतल्दै मेलम्चीवासी
[…] अपार्टमेन्ट, बहुतले आवासीय भवन, कोलोनीहरूमा बसोबास गर्ने उपभोक्ताहरूलाई तोकिएका शर्त पूरा भएमा अन्य ग्राहकसरह विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ । […]
मुसहर बस्तीमा चिसोको प्रहार : न लुगा, न खाना - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] यो पनि पढ्नुहोस्:४ कोठाको एक तले पक्की घर बनाउन के–केमा कति लाग्छ खर्च ?काठमाडौँमा अपार्टमेन्ट किन्ने सोचमा … […]
शान्तीको जीवनमा अशान्ति ल्याउँदै क्रसर « Mero LifeStyle
[…] यो पनि…घरेलु उद्योग तथा साना पसल व्यवसाय कहाँ दर्ता गर्ने ?घरेलु उद्योग तथा साना पसल व्यवसाय कहाँ दर्ता गर्ने ?काठमाडौँमा अपार्टमेन्ट किन्ने सोचमा … […]
[…] घर बनाउन के–केमा कति लाग्छ खर्च ?काठमाडौँमा अपार्टमेन्ट किन्ने सोचमा …घर बनाउने सपना, ‘गुरु’ ले पार्छ […]
घर बनाउने सपना, ‘गुरु’ ले पार्छ साकार « Mero LifeStyle
पिपुल्स हाइड्रोपावरले ९६ करोडको आईपीओ निष्कासन गर्ने « Mero LifeStyle
[…] पनि…काठमाडौँमा अपार्टमेन्ट किन्ने सोचमा …के–केमा पाइन्छ कृषि अनुदान, कसरी लिने […]
साताको पहिलो दिन : यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर « Mero LifeStyle
[…] साना पसल व्यवसाय कहाँ दर्ता गर्ने ?काठमाडौँमा अपार्टमेन्ट किन्ने सोचमा …के–केमा पाइन्छ कृषि अनुदान, कसरी लिने […]
सुनको मूल्य तोलामा २०० ले घट्यो, चाँदीको स्थिर « Mero LifeStyle
बल्ल पायो मार्केटिङले नयाँ मोड « Mero LifeStyle